Ny Fahitan’ny Mpamily Iray Ao Shina Ny Uber · Global Voices teny Malagasy
Ny Fahitan'ny Mpamily Iray Ao Shina Ny Uber
Voadika ny 10 Jolay 2015 2:24 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Français, Italiano, bahasa Indonesia, 繁體中文, 简体中文, English
Sary an'i “2 dogs” tao amin'ny Flickr . CC BY-NC-ND 2.0
Ity ambany ity ny dikan'ny “Uber ao Shina: Fijerin'ny Mpamily Iray” nosoratan'i Lyn Jeffery, nivoaka voalohany tao amin'ny bilaogy 88 Bar ary naverina navoaka etoana niaraka amin'ny fanomezan-dàlana avy aminy.
Hitan'ireo tanàna lehibe ao Shina ny fifaninanana mahery vaika eo amin'ny samy mpamily mba ho tafiditra amin'ilay sehatra fiantsoana fiara mpitatitra toy ny Uber ary Didi Kuadi ho an'ilay niforona toy izany tao Shina. Herinandro vitsivitsy no niainako tao Shina, nampiasako ny “Uber-mbahoaka”, ilay Orinasa Amerikana mampiasa ilay tolotra fizaràna anjara fihodinana, izay ara-teknika dia tsy natao hitady tombony ara-bola, mampiasa fiaran'olon-tsotra, ary nitafatafàko taminà mpamily Uber 10-12 tao Beijing sy Shenzhen. Na tsy ara-dalàna aza ireny tolotra ireny amin'izao fotoana izao, dia mora ny mahita Uber iray ao anatin'ny minitra vitsy ao amin'ireo tanàna roa ireo. Ary dia mahazendana fa miasa tsara ao Shina ny dika amin'ilay fampiasa Amerikana.
Ireto ny zavatra fantatro avy amin'ny resaka nifanaovako tamin'ireo mpamily Uber sy ireo mpamily fiarakaretsaka ara-dalàna. Tsy voatery hitombina, nefa izay no fomba fijerin'ny mpamily ny fiasan'ilay orinasa ao Beijing sy Shenzhen.
Raha tamin'ny lohataonan'ny 2014 no noraisina ny andiany voalohany tamin'ireo mpamily tao Beijing, nampitomboin'i Uber ny fanentanany tamin'ny Aprily tamin'ity taona ity, izay nitondra mpamily betsaka kokoa teny an'arabe. Nanolotra fifanarahana maro karazana izy. Amin'izao fotoana izao, mandoa volabe amin'ireo mpamily ny Uber. Ny mpamily iray tao Beijing niresaka tamiko dia mahazo 9.000 RMB, na 1.500 doalra isan-kerinandro, izay ny 75% amin'io dia ireo pitsopitsony atolotry ny Uber. Mandoa 2 RMB isaky ny kilaometra ny mpandeha ($0.25), ary ampian'ny Uber 2 RMB amboniny isaky ny kilaometara izany ($0.33). ary mbola misy fanampiny hafa mitentina .25 RMB ($.04) isa-minitra.
Manana fetra farafahakeliny enjehany isan-kerinandro ireo mpamily mba hahazoany fanampiny ambony kokoa. Ao Beijing dia 80 isan-kerinandro izany.
Tian'ireo mpamily ny Uber satria misy fanaovana tombana ireo mpamily sy ny mpandeha, ary azon-dry zareo atao ny mandà tsy hitondra mpandeha tsy mahay manaja na mamo. Tsy manana izany rehetra izany ireo fampiasa vita Shinoa.
Tian'ny mpandeha ny Uber satria farafaharatsiny amin'izao fotoana izao dia io no mora noho ireo tolotra ataon'ny shinoa ary ireo mpamily, izay mikatsaka ny fandaharana azy ho kintana 5, dia miezaka ny mamily am-pilaminana sy amim-pahamalinana raha miohatra amin'ireo fiarakaretsaka tranainy.
Mitombo ny isan'ny fisamborana. Ao Beijing, raha kely indrindra dia manasazy 9.000 RMB ($1,500) ary hatramin'ny 20.000 RMB ($3,333) ireo manampahefana. Na izany aza, hita ho mendrika ny handramana ihany ilay izay satria be ny vola raisina. Tsy vitako, na izany aza, ny naka mpamily Uber mba hitondra ahy hoany amin'ny seranam-piaramanidina satria hita ho risika tafahoatra loatra.
Toy ny any Etazonia, ny sasany amin'ireo mpamily dia manao azy io noho ny lafiny sosialy na, amin'ny tranga sasany, satria leo ry zareo na tokantena/manirery. Nilaza ny mpamily iray niresahako fa hoe ora vitsy aorian'ny andaozany ny asany izy no manao azy io isanandro, mba te-hanan-javatra hafa atao fotsiny.
Efa misy fiantrakany miabo sahady amin'ireo fiarakaretsaka tranainy ireo fampiasa itadiavana fiara mpitatitra, izay ny mpamily azy ireny dia, aleo lazaina tsotra, tsy mba tsara laza amin'ny fahaizana mandray olona/fahalalam-pomba. (Matetika ireo mpitondra fiarakaretsaka tranainy no mirona amin'ny saran-dàlana ambany izay ho an'ny toerana akaiky, na lasa amin'ny làlan-diso tsy araka izay niriany haleha.)
Tahaka ny maka ny toetsaina mihainohaino miandry zavatra izanymomba izay ho fandrindràna ireo mpamily ary miezaka ny manangona volabe araka izay tratrany. Mandritra izany fotoana izany, ampidinin'ny Uber ny fanampim-bola fanomeny satria efa maro ireo mpamily azony. Amin'ny filaza hafa dia mitombo ny risika nefa ny tamby mitontongana….hatreto.